Nokia bu akara ndi na-ewelite ngwa ngwa ya ngwa ngwa | Gam akporosis
N'ihi eziokwu ahụ bụ na ụdị niile etinyela batrị na mmelite nke mmelite, ọ dịkarịa ala ndị kachasị ukwuu, nke Nokia bụ akara ngosi Android nke meriri tebụl nke ndị isi na ugboro ole, ọ nwere ike ọ gaghị adị mkpa dịka ọ ga - adị 3 ma ọ bụ 4 afọ gara aga.
Ọhụrụ akụkọ si Firmlọ ọrụ nyocha Counterpoint na nke a na - ahụ anya etu ndị nrụpụta dị iche iche si bipụta mmelite ha n'afọ gara aga, site na nkeji nke atọ ma ọ bụ Q3 nke 2018 ruo Q2 nke 2019.
Nokia ga - abụ onye na - achị n’ọsọ ahụ maka mwepụta nke mmelite jiri 96 pacenti nke ekwentị ha wepụtara n'afọ gara aga nke nwere gam akporo 9.0 achịcha; Na agbanyeghị na desserts sitere na gam akporo 10 abaghịzi uru.
Ihe na-adọrọ mmasị bụ na Nnukwu onye Korea bụ Samsung nọ n'ọnọdụ nke abụọ na 89% nke ngwaọrụ gị nwere ụdị kachasị ọhụrụ. Ihe karịrị data dị mkpa iji bụrụ otu n'ime ụdị benchmark na gam akporo na nke ahụ na-egosi nnukwu ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ na-eme; n'agbanyeghị, echefula na ntụnyere anyị mere ụbọchị ole na ole gara aga n’etiti Note10 + na S10 + na vidiyo.
Anyị ga-aga Xiaomi na Huawei nwere 80 pasent nke ngwaọrụ gị na achịcha. Ọ bụ ezie na e nwere ụdị ndị ọzọ, site na nke a na-atụ anya ihe ọzọ, ha na-anọ ihe karịrị 50% nke ngwaọrụ ha na gam akporo 8.1 Oreo.
Ihe ọzọ dị mkpa dị na akụkọ a metụtara ya Nokia site n'igosi na akara a emelitela 50 percent nke ekwentị ha kwalitere n'afọ gara aga ka Pie n'ime ọnwa isii. N'ezie, ọ nweghị ụlọ ọrụ ọzọ, ma e wezụga Xiaomi na Lenovo, ndị emelitere achịcha 12 ọnwa mgbe emechara ya.
Akụkọ na-adọrọ mmasị iji hụ etu ụdị si eme ya na ihe ha na-agba nwere ihe ndị gị na Nokia na-emeri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nokia bụ ihe eji eme gam akporo nke meriri onye ndu n’ime ugboro ugboro